Odayaasha dhaqanka Hawiye oo ka hor yimid muddo kordhinta | KEYDMEDIA ONLINE
Odayaasha Dhaqanka Beelaha Hawiye, oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hor yimid muddo kordhintii uu Golaha Shacabka sida dadban ugu sameeyay Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya – Odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye ayaa sheegay in aan la aqbali doonin muddo kordhin sababi karta burbur iyo kala tag mar kale ka dhex dhaca shacabka Soomaaliya kadib kala haadkii 1991-kii.
Guddoomiyaha dhaqanka beelaha Hawiye, Nabaddoon Maxamed Xasan Xaad, ayaa Golaha Shacabka iyo Farmaajo uga digay in ay Dowlandnimada la soo yabyabayay 20-kii sano ee lasoo dhaafay burburiyaan, dalka dib ugu celiyaan dagaallo sokeeye.
“Wadada ay Farmaaajo iyo Mursal hayaan haddii la qaado, waxaa dib loogu laabanayaa bur bur iyo mugdigii laga soo baxay” Ayuu yiri Nabaddoon Xaad.
Nabaddoon Abuukar Ganey, oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Hawiye ayaa isna sheegay, in Farmaajo dalka iyo dadka u turo oo uusan dagaal sokeeyo hormuud u noqon, isla markaana uu dib ugu laabto miiska wadad haddalada.
“Shuruud la’aan ku noqon goobta nabadda, teendhada afisyooni ku laabo, sharci darro laguma joogi karo, intaas ayaan ku leennahay”. Ayuu yiri Nabaddoon Abukar Ganey.
Madaxtoyada Soomaaliya ayaa dhankeeda maanta abaabushay odayaal ay ugu yeeraty in ay yihiin dhaqanka Hawiye, kuwaas oo dhankoodu soo dhaweeyay muddo kordhinta loo sameeyay hay’adaha sharci dajinta iyo Fulinta.